Garoonka Diyaradaha Bole ee Magaalada Addis Ababa oo saacadihii la soo dhaafay Diyaarad ka soo dagin. | Arrimaha Bulshada
Home News Garoonka Diyaradaha Bole ee Magaalada Addis Ababa oo saacadihii la soo dhaafay Diyaarad ka soo dagin.
Garoonka Diyaradaha Bole ee Magaalada Addis Ababa oo saacadihii la soo dhaafay Diyaarad ka soo dagin.
Wednesday, November 03, 2021 News
Bulsha:- Wararka ka imaanaya Magaalada Addis Ababa ee Dalka Itobiya ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay aysan ka soo dagin wax diyaarad ah Garoonka Diyaaradaha ugu wayn Itobiya Bole Airaport ee Magaalada Addis Ababa.
Wararka ayaa sheegaya in Diyaaradihii ka soo dagi jiray halkaas ay cabsi soo wajahday saacadihii la soo haafay, maadaama xaalad Deg deg ah xalay lagu soo Rogay dalka Itobiya gaar ahaan Magaalada Addis Ababa.
Sidoo kale Dalka Itobiya ayaa waxaa ku yaala mid ka mid ah Garoomada Diyaaradaha ee ugu Casrisan afrika oo ah Bole Airaport.